Extreme tsara indrindra Attractions In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Extreme tsara indrindra Attractions In Eoropa
Tsy misy tsy fahampiana ny tafahoatra manintona any Eoropa. Adrenaline mitady sy tia ny fanatanjahan-tena tafahoatra afaka traikefa Eoropa isan-karazany toerana amin'ny isan-karazany ny asa. Raha toa ianao nanontany tena ny fomba ahatongavana any lamasinina, izahay no nanarona, koa! Ireto ny Top Picks ho ny tsara indrindra tafahoatra manintona any Eoropa:
Tsara indrindra any Eoropa Extreme Attractions – Innsbruck, Aotrisy
Fa ny adrenaline-nahatonga andro, mijery intsony noho Innsbruck in Aotrisy. Misy ny be ny zavatra tokony hatao, na izay tadiavinao fiadanana na fientanentanana. raha maro mpizaha tany mankanesa any Innsbruck indrindra noho ny idyllic tarehy, dia manana betsaka kokoa ho atolotra. Afaka hiaina ny bobsleigh mitaingina amin'ny Olympiaworld, maka bungee eny Hanketo europabrücke na mandehana tia manao ski ambony. Nature dia mahatalanjona, ary ny hevitra dia mahagaga. Na inona na inona no mifidy ny hanao amin'ny Innsbruck, zavatra iray loha no azo antoka - dia tsy ho leo. Ary afaka tonga mora foana izany lamasinina. Tsy mifandray ny sisa sy ny hafa lehibe Aotrisy Eoropa rail hubs.
Munich ho Innsbruck Lamasinina
Oberstdorf ho Innsbruck Lamasinina
Extreme Attractions in Interlaken, Soisa
Soisa Mety tsy ho firenena voalohany ny hevitrao, raha ny foto-kevitra avy no tsara indrindra any Eoropa Extreme Attractions. Na izany aza, fisehoana voalohany ho azo antoka fa afaka mamitaka. Interlaken dia heverina ho iray amin'ireo toerana mafampana voalohany ho an'ny fanatanjahan-tena tafahoatra any Eoropa. Tena tsara tarehy tanteraka faritra ampy fitaovana mba hanomezana fahafaham-po ny saina iray adrenaline mpikatsaka. Ny sasany amin'ireo asa ao Interlaken dia paragliding, Rafting, bungee fitraitraiky, ary canyoning. Fitoriana Soisa dia azo idirana lamasinina, toy ny misy lalana avy amin'ny firenena manodidina ary ny tanàna any Eoropa.
Attractions ao amin'ny Le Marche, Italia
Italia Atsinanana dia ny ankamaroany fantatra amin'ny kanto, kolontsaina sy zava-mahagaga culinary. Na izany aza, laza io akory tsy midika hoe tsy misy zavatra hafa ny faritra tsara tarehy ity. Le Marche dia malaza iray tsy manam-paharoa sy tsy nampoizina antony. Toa lehibe rehefa mitsambikina avy tao amin'ny fiaramanidina manidina tafahoatra an'iny. Skydivers za-draharaha mahafantatra izany, fa Le Marche dia mahery avy toerana hanandrana Extreme Attractions tany Eoropa sy skydiving indrindra ho an'ny fotoana voalohany. Raha toa mampientam-po ho anao, dia afaka maka mahafinaritra, Toerana mahafinaritra fiaran-dalamby mitaingina ny alalan 'Italia ho any Le Marche.
Florence ho Macerata Lamasinina
Florence ho Jesi Lamasinina
Roma ho Ancona Lamasinina
Roma ho Pesaro Lamasinina
Tena ao amin'ny Mont Blanc
Toy ny tendrony avo indrindra amin'ny rehetra Eoropa, Mont Blanc Nahasarika foana ny anjara ara-drariny ny mpitsidika. Ny climb ho any amin'ny fihaonambe dia tsy noho ny reraka am-po, izay no mahatonga ny mpizaha tany mitady ny fientanam-po tia azy tokoa izany. Mont Blanc Nampanantena traikefa nahafinaritra, mampivarahontsana sy mahatalanjona toerana tsara tarehy, Ary mametraka fanamby tsy ny rehetra dia afaka mihaona. izany fialantsasatra tonga lafatra toerana ho an'ireo izay mitady faran'izay manintona any Eoropa. Ary raha tsy eo amin'ny toe-po noho ny fihanihana, Mbola afaka hiaina Mont Blanc amin'ny alalan'ny paragliding. -tsy izany, hijery ny Glacier amin'ny iray amin'ireo maro nitarika treks izay malaza any amin'ny faritra. Afaka tonga ny tanànan'i Chamonix amin'ny fiaran-dalamby ary avy eo dia Travel ny Mont Blanc sambo Mont Blanc ny Express.
No tadiavinao ny manaraka adrenaline-feno Extreme Attractions any Eoropa?
Jereo intsony noho izany faran'izay manintona. Rehetra ireo toerana ireo mora idirana lamasinina, Rehetra tsy maintsy atao dia Boky ny Tickets ary drafitra ny diany!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-extreme-attractions-in-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#tafahoatra #traveleurope traikefa nahafinaritra europetravel Tranride Train Travel travelaustria travelswitzerland